नेपालमा जलबिद्युत क्षेत्रका आठ समस्या | Makalukhabar.com
नेपालमा जलबिद्युत क्षेत्रका आठ समस्या
बि.स. १९६८ मा निर्मित ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलबिद्युत आयोजना नेपालको एक मात्र प्रथम आयोजना थिएन बल्कि, दक्षिण एशिया कै प्रथम आयोजना थियो । अहिले उक्त आयोजना निर्माण भएको १०६ बर्ष ब्यतित भईसकेको छ । जबकी कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसीनबाट २१ हजार मेगावाट र कोशी बेसीनबाट २२ हजार मेगावाट र अन्यबाट ८ हजार मेगावाट गरी कूल ८३ हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । जसमा आर्थिक तथा प्राबिधिक रुपमा ४२ हजार १ सय ३३ मेगावाट उपयुक्त ठ–याईएको छ । तर, जलबिद्युत उत्पादन क्षमता ९६५ मेगावाट मात्र पुगेको छ ।
हाल सम्म ७५ जिल्लामा जलबिद्युत क्षमता पुगेपनि कूल जनसंख्याको ७४ प्रतिशतले मात्र यसको उपभोग गर्न पाएका छन् । नेपालमा जलबिद्युत उत्पादन मुलतः सार्बजनिक, निजी, सार्बजनिक–निजी साझेदारी गरी तीनवटा बिधिमा भईरहेको छ । अहिले नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र सार्बजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया, ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली ३ ए, १४ मेगावाट क्षमताकोे कूलेखानी तेस्रो, १४० मेगावाट क्षमताको तनहु जलबिद्युत उत्पादन भईरहेको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सिस्टर कन्सर्न, चिलिमे जलबिद्युत आयोजनाको प्रबद्र्धनमा स्यान्जेन, तल्लो स्यान्जेन, रसुवागढी, मध्येभोटेकोशी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । जसको कुल क्षमता २७०.०३ मेगावाट रहेको छ ।
अपर तामाकोशी हाईड्रो पावर लिमिटेड गठन भई सार्बजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण भईरहेको छ । तथापि, जलबिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा तमाम समस्याहरु छन् । जुन तगाराहरु नपर्गली जलबिद्युत क्षेत्रको बिकास कठिन छ । जो तपशिल बमोजिम छन्–
पहिलो समस्याः प्राविधिक जनशक्ति अभाव
जलबिद्युत आयोजना निर्माणार्थ आबश्यक पर्ने प्राबिधिक जनशक्ति आन्तरिक बजारमा उपलब्ध हुन नसक्नु जलबिद्युत क्षेत्रको प्रथम समस्या हो । जलबिद्युत बिकासका लागि उच्चस्तरीय प्राबिधिक ज्ञानको साथै प्राबिधिकहरुको आबश्यक्ता पर्दछ । तर, नेपालमा त्यस्ता ज्ञान भएको दक्ष जनशक्तिको अभाब छ । आन्तरिक बजारमा बिज्ञहरुको अभाब हुँदा महंगो शुल्क तिरेर बिदेशवाट बिज्ञ झिकाउनु परेको छ ।
चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजना स्वदेशी प्रबिधि र श्रममा निर्मित भएको भनियता पनि डिपिआर, सिभिलि, हाईड्रोमेकानिकल, इलोक्ट्रोमेकानिकल जस्ता कोर कार्य आयतित जनशक्तिको भरमा भएको छ । फलस्वरुप परियोजनाको लागत बृद्धि मात्र हुने गरेको छैन, ठूला मात्रामा परिवत्र्य मुद्रा पलायन भएको छ ।
दोस्रो समस्याः आन्तरिक पूँजी अभाव
ठूला आयोजना निर्माणको लागि आबश्यक पर्ने पूँजी आन्तरिक रुपमा उपलब्ध नहुनु जलबिद्युत क्षेत्रको दोस्रो समस्या हो । ठूलाठूला जलबिद्युत परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठूलो परिमाणमा पूँजी आबश्यक पर्दछ । जुन हाम्रो जस्तो गरिब देशमा आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सजिलो छैन । त्यसैले बिदेशी अनुदान, बिदेशी कर्जा वा बिदेशी संयुक्त लगानी बिना ठूला आयोजना निर्माण नै गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता छ । पश्चिम सेती थ्रिगर्जेजको र बुढीगण्डकी गेजुवा एन्ड इलेक्ट्रिक करपोरेशनको पोल्टामा फालिनु त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।
बैंक तथा बित्तीय संस्थाको मुल कार्य दीर्घकालीन लगानी गर्नु हो । हाल नेपाल २८ वटा बाणिज्य बैंक र दर्जनौ बित्तीय संस्थाहरु छन् । नेपाल बैंक, कृषि बिकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक वाहेक अधिकांश बैंकमा बैदेशिक लगानी रहेको छ । तर, ५० मेगावाटको आयोजनामा निर्माण गर्न सक्ने एकल हैसियत सायदै बैंक सँग छ । वाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने ऋण मध्ये ५ प्रतिशत हिस्सा जलबिद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले गरेको प्राबधान टाउको दुखाई जस्तै भएको छ । अर्थात, अटो, रियलस्टेट क्षेत्र जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी इच्छित बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु जलबिद्युत लगानीमा उदाशिनता ओकली रहेका छन् ।
तेस्रो समस्याः बजार अभाब
उत्पादित बिजुली बिक्री गर्ने बजारको सुनिश्चितता नहुुनु जलबिद्युत क्षेत्रको तेस्रो समस्या हो । जलबिद्युत उत्पादन हुँदैमा हाम्रो लक्ष्य पुरा हुँदैन । उत्पादित बिद्युतको खपत हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ । अर्थात, उत्पादित बिजुली खपत वा बिक्री नभएमा लगानीको औचित्यता रहँदैन । अधिकांश नेपाली गरिब मात्र छैनन्, उद्योगधन्दा बिकास भई नसकेको अबस्था छ । आजको दिनमा ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भईहाल्यो भने त्यो उत्पादन न त आन्तरिक बजारमा खपत हुन सक्छ न त बिक्री गर्ने भरपर्दो बजार नै छ ।
यसै पनि हाम्रो प्रति ब्यक्ती बार्षिक बिजुली खपत १६० किलोवाट मात्र छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान हाम्रा संम्भाब्य बजार भएता पनि तीनले बिजुली खरिद गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् । भारतले बिजुली खरिद गर्ने चासो नदेखाउँदा पश्चिम सेती आयोजनावाट एशियाली बिकास बैंकले हात झिकेको थियो । छिमेकी मुलुकहरुको बैदेशिक ब्यापार नीति हाम्रो पक्षमा नभएको खण्डमा महंगो लागतमा उत्पादित बिजुली बिक्री नहुने वा सस्तो मुल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
चौथो समस्याः राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरता
राजनीतिक संक्रमण वा नीतिगत अस्थिरता जलबिद्युत क्षेत्रको चौथो समस्या हो । अस्थिर राजनीतिबाट स्थिर नीतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात राजनीतिक अस्थिरताले झनै जरो गाढेको छ । कुनै पनि सरकारले पुरा कार्यकाल पुरा गर्न पाएका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आलोपालो सरकार चलाएका छन् । बर्तमान प्रधामन्त्री ओली ४० औं प्रधानमन्त्री हुन् । नीति निर्माण गर्ने मुल दायित्व राजनीतिज्ञ कै हो तर, हाम्रो राजनीति सधैं पेचिलो अस्थिरताबाट गुर्जिरहेको छ । सरकार परिबर्तन हुँदा नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता परिवर्तन हुँने गरेका छन् । उक्त नीतिगत अस्थिरतावाट जलबिद्युत क्षेत्र पनि अछुतो छैन ।
पाँचौं समस्याः विद्युत खरिद सम्झौता
अमेरिकी डलरमा बिद्युत बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुनु जलबिद्युत क्षेत्रको पाँचौ समस्या हो । बिदेशी लगानीमा निर्मित आयोजनाको बिजुली खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरमा हुँने गरेको छ । यहाँ बिद्युत खरिद सम्झौता गर्दा डलर के कति बलियो हुन सक्छ भन्ने एकिन भएको पाईदैन । जबकी डलर दिनानुदिन शक्तिशाली भईरहेको अबस्था छ । खिम्ती र भोटोकोशी त्यसका ज्वलन्त उधारण हुन । खिम्ती र भोटोकोशी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ३० बर्षका लागि डलरमा पिपिए भएका छन् । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण घाटामा जानुको मुल कारण महंगोमा खरिद गरी सस्तोमा बिक्री गर्नु हो ।
छैटौं समस्याः कमजोर पूर्वाधार
नाजुक पूर्वाधार जलबिद्युत क्षेत्रको छैठौं समस्या हो । जलबिद्युत परियोजना निर्माणका लागि यातायात सुबिधा आबस्यक पर्दछ । तर, धेरै जसो जलबिद्युत आयोजनाहरु ग्रामिण र बिकट क्षेत्रमा पर्ने हुँनाले यातायात सुबिधा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले जलबिद्युत परियोजना निर्माण गर्नु पूर्ब सडक, पुलपुलेसा, पहुँच मार्ग निर्माण गर्नु परेको छ । उत्पादित बिद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाईन सम्म जोड्न ट्रान्समिसन लाईन आबश्यक पर्छ । ट्रान्समिसन लाईन निर्माणका लागि पनि सडक पूर्वाधार तगारो बनिरहेको छ ।
सातौं समस्याः आयोजना निर्माणमा ढिलाई
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट निर्माण भईरहेका कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा पुरा हुन नसक्नु जलबिद्युत क्षेत्रको सातौं समस्या हो । बिद्युत प्राधिकरणको बित्तीय स्वास्थ्य सबल हुन निर्माणधिन आयोजना किटान भएकै समयबिन्दुमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्नुपर्छ । आयोजना निर्माण बिलम्ब हुनु भनेको आयोजनाको लागत बृद्धि हुुनु मात्र होईन बिलम्ब हुँदाको अबधिको राजस्व गुम्नु पनि हो । तर, अहिले त्यस्ता निर्माणाधिन आयोजना पाउनै सकिँदैन जो तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न भएको होस अथवा लागत बृद्धि नभएको होस ।
३०/४० मेगावाट क्षमता सम्मका आयोजनाहरु सामान्यतया ३/४ वर्षमा पुरा हुनुपर्नेमा ९/१० बर्ष सम्म पनि पुरा नभएका दृष्तान्त छन् । ४० मेगावाट क्षमताकोे राहुघाट, ६० मेगावाट क्षमताकोे माथिल्लो त्रिशुुली ३ ए, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामकोशी बिलम्बका ताजा सबुतहरु हुन । मात्र १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो १० बर्ष देखि अपुरो–अधुरो छ ।
आठौं समस्याः राजनीतिक हस्तक्षेप
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न नसक्नु जलबिद्युत क्षेत्रको आठौं समस्या हो । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले तय गरेको उद्देश्य प्राप्तीको लागि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका अह्म हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको कार्यक्षमता, निष्ठा, इमान्दारिता र सबल नेतृत्वको वाहुबलमा प्राधिकरणले नयाँ जीबन प्राप्त गर्न सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण बर्तमान कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ हुन ।
प्राधिकरणले खुद नोक्सानी– ०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड बेहोरेकोमा ०७३/७४ मा ९७.८९ अर्बमा ओर्लिएको छ भने, बिद्युत चुहावट सोही अबधिमा २५.७८ प्रतिशतबाट २२.९० प्रतिशतमा झरेको छ । घरेलु ग्राहकका लागि लोडेसेडिङ लगभग निमिटान्न भएको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको समग्र अबस्था सुधार हुनुमा प्रमुख कार्यकारीको भूमिका नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । तथापि, कार्यकारी पद राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त राख्न सकिएको छैन ।
यी आठ कारणलाई घोत्याउँदै विद्युत विकासमा राज्यले आवश्यक नीति निर्माण गर्ने हो भने, मुलुकको विकासमा कायापलट गर्न बेर लाग्दैन ।
सुरु हुँदैछ ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन–२
‘भोलि म तिम्रो लागि जहाँबाट भएपनि रोटी ल्याइदिन्छु । पानी पिएर सुत । निदाएपछि भोक पनि बिर्सिन्छ ।’ बच्चाले पेटभरि पानी खायो र कुकुर झैं गुँडुल्किएर सुत्यो । बच्चाकी आमाको आँसु भरिएर आयो । भोकाएको बच्चासँगै उनी पनि सुत्न गइन । निद्रा कसरी लाग्थ्यो र ! दुवैका आँखा अघिल्तिर आकास घुमिरह्यो । आमाले बच्चा... जारी राख्नुहोस...
मेरी विद्रोही आस्था गल्ती भएपनि यस्तरी नरोइदेउ
लेखौं कि नलेखौंको दोधारमा मेरा औंलाहरु ल्यापटपका कि बोर्डमा थिचिएका छन् । लेखौं आफ्नी प्रिय । नलेखौं प्रियले बोलेका अपाच्य शब्दले मन भतभती पोलिरहेको छ । दुइ दिन देखि । मलाई गायिका आस्था राउत ड्यासिङ लाग्छ । हक्की स्वभावकी लाग्छ । स्वर पनि त हक्की नै छ नी । सुरेश अधिकारीको शब्दमा जब आस्थाको ड्यासिङ स... जारी राख्नुहोस...
नेपाल चिकित्सक संघको आसन्न निर्वाचन र नेतृत्वको सवाल
७० वर्षको इतिहास भएको देशकै सबैभन्दा पूरानो पेशागत संगठनका हैसियतले नेपाल चिकित्सक संघको एउटा गौरवपूर्ण इतिहास छ। देशमा विभिन्न समयमा चलेका परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुमा सक्रिय सहभागिता एवं नेतृत्वमार्फत पेशागत मात्र नभई बृहत्तर राष्ट्रिय हितका निम्ति समेत क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्दै गौरवशाली इतिहास राख्... जारी राख्नुहोस...
शिवमायाको राजीनामा संसदको सर्वोच्चतामाथीको प्रहार !(टिप्पणी)
योग्यता नपुगेर होईन महिला भएकै कारण अहिले डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे दवावमा छिन् । पार्टी नेतृत्वबाटै उनको पद धरापमा छ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार अभियोगमा पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको सभामुख पदकालागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुख बारे टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । त्यसको सिधा असर शिवमा... जारी राख्नुहोस...
कहिले पाउने पीडितले न्याय ?
पुस २६, काठमाडौं । अहिले नेपालमा बहस सिद्धबाबा उर्फ कृष्ण बहादुर गिरीकै छ । उनी कसरी यति ठूला व्यक्ति भए त्यो उनै जानुन् । तर उनीबाट पीडित भएका भनिएकाहरुले न्याय पाउने कि नपाउने ? कहिले पाउने ? पीडकलाई नै पीडित मानेपछि वास्तविक पीडितहरुले न्याय पाउलान् ? ठूला व्यक्ति जस्तोसुकै आरोपमा मुछिदा पनि उम्क... जारी राख्नुहोस...
आखिर के हो मिलेनियम च्यालेन्ज ?
नेपालले सम्झौता गरेको एमसीसी सहयोग र इण्डो प्यासिफिक रणनीति एउटै हो कि फरक हो ?नेपालले एमसीसी सहयोगलाई स्वीकार गर्दा नेपालको हित हुन्छ या अहित ?यसबारे पर्याप्त व्याख्या र बहस हुन सकेको छैन ।यही अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै कृष्णबहादुर महरा र उनी निकटस्थहरुले एमसीसीलाई अस्वीकार गरेकै कारण आफूमाथि अमेरिक... जारी राख्नुहोस...
नेताको पाप, जनताको श्राप
‘ओहो सुवर्णशम्शेर कत्रो धनी मानिस कलकत्तामा तपाईंले देख्नु नै भएको छैन । भान्छाघर जहाँ चौबीसै घण्टा भान्छे बसेर पकाइरहन्थे । किसिम किसिमका नोकरहरु । जहाँ गएपनि घर, व्यापारिक केन्द्र र उहाँको पुस्तकालय पनि भव्य थियो । चट्ट गएर पुस्तकालयमा बस्यो, नोकरचाकर त्यहीँ नै आइरहन्थे । जे माग्यो त्यो ल्याइदिन्थ... जारी राख्नुहोस...
सन्त त्यस्ता व्यक्तिलाई भनिन्छ, जसले सत्यको अनुशरण गर्छन्, आत्मज्ञानी हुन्छन् । यो कोटीमा सन्त कवीर दास, सन्त तुलसीदास, सन्त रैदास आदीका नाम आउँछन् । सन्त शब्द ‘सत्’ शब्दको कर्ताकारक बहुबचन हो । यसको अर्थ साधु, सन्यासी, त्यागी पुरुष वा महात्मा हुन्छ । अहिले ‘सत्’ हराएको छ । अब सन्तको परिभाषालाई कसरी... जारी राख्नुहोस...
‘नेताले कर्मचारीलाई गाली गरेर उम्किनु भनेको गाँजा खाएर गफ लाउनुजस्तै हो’
दुई दाजुभाइ नदी किनारामा घुम्न गएछन । घुम्दै गर्दा भाइले दाजुको खुट्टा कुल्चिन पुगेछ । दुखेको आवेगमा दाजुले भाइलाई एक थप्पड लगाएछ । केही नभनी भाइले नदीको किनारको बालुवामा लेख्यो– ‘मैले अन्जानमा खुट्टा कुल्चिदा दाजुले मलाई एक थप्पड हिर्काउनु भयो ।’भोलिपल्ट दुवै नुहाउन नदीतट पुगेछन् । नुहाउने क्रममा भ... जारी राख्नुहोस...
पर्यटनमा युवा सहभागिता आवश्यक
युवा देश विकासको संवाहक हुन् । राष्ट्रले युवा शक्तिलाई परिचालित गर्न सकेको खण्डमा देशमा समृद्धिको ढोका खोलिनेछ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अवधारणालाई सरकारले अघि सारेको छ । यसैअनुरुप नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण भएका छन् । यस अवधारणामा सरकारले युवासँग हातेमालोको थालनी गर्नुपर्छ । समृद्ध नेपाल बनाउ... जारी राख्नुहोस...